‘Lafta-gareen’ oo Muqdisho soo gaaray, Guud-laawe, Madoobe & Deni oo wali maqan | KEYDMEDIA ONLINE
‘Lafta-gareen’ oo Muqdisho soo gaaray, Guud-laawe, Madoobe & Deni oo wali maqan
Madaxweynaha Maamulka Koofur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, ayaa ka soo degay garooka diyaarahada Aadan Cadde, ee Caasimadda Soomaaliya, wuxuuna u yimid ka qeyb galka shirka uu iclaamiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed ‘Lafta-gareen’ ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si uu uga qeyb galo shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka, kaas oo la qorsheeyay in uu Caasimadda ka furmo 20-ka May oo maanta ku beegan.
Masuuliyiin ka tirsan Golayaasha Dowladda Federaalka, ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Cabdicasiis Lafta-gareen oo noqonaya Madaxweynihii labaad ee soo gaara Mudisho kadib Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’.
Lafta-gareen, ayaa saaxib dhow la ahaa Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo, wuxuuna qeyb ka yahay madax si weyn kaga soo hor jeedday habkii ay wax u rabeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo Farmaajo ay isku fahmi waayeen arrimaha doorashooyinka dalka.
Axmed Maxamed Islaam, ‘Madoobe’ ayaa la filayaa inuu dhawaan soo dago, halka Madaxweynaha Puntland oo hadda ku sugan Imaaraadka Carabta, la rajeynayo inuu Caasimadda soo gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka HirShabeelle Cali Guud-laawe, ayaa hal maalin dib u dhici kara maadaama uu ku guda jiro xal u helidda arrimo siyaasadeed oo ka aloosan Maamulkiisa, kuwaas oo sababay dagaalkii khasaaha badan dhaliyay ee shalay ka dhacay Jowhar.